31/10/2015 – Gentleman Magazine
လက်ရှည် (ဂရပ်ဖစ်) ====== GM စိတ်ကြိုက် ယိုးဒယားမှ တင်သွင်းထားတဲ့ လက်ရှည် ရှပ်အကျီ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင် ၃ မျိုးရှိပြီး ဂျင်းနဲ့ ၀တ်ဝတ် စတိုင်ပန် နဲ့ပဲ ၀တ်ဝတ် စမတ်ကျကျ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ရှိစေမှာပါ… ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၇၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်.. လာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့
မျိုးဗီဇပြု ပြင်ထားသည့် ခြင်တွေကို အသုံးပြုသင့်သလား?
မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားသည့် ခြင်တွေကို အသုံးပြုသင့်သလား? ခြင်ဆိုတဲ့ အင်းဆက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးရွားဆုံးသတ္တ၀ါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်သေးပေမယ့် ကိုက်ရင်နာကျဉ်ရရုံတင်မကပါဘူး။ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတို့လို နှစ်စဉ်လူဦးရေ သိန်းဂဏန်းလောက်ကို ဇီဝိန်ချွေနေတဲ့ ရောဂါဆိုးတွေကိုလည်း ပျံ့နှံ့စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ခြင်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လူတွေက နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ရောဂါဆိုးတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ခြင်တွေကို
သင့်ကလေးကို သင်ကြားပေးသင့်တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ (၁၁) ခု
သင့်ကလေးကို သင်ကြားပေးသင့်တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ (၁၁) ခု **************************************************** ကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်တွေရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ထိန်းကျောင်းဖို့ အလုပ်ပိုကြ ရပါတယ်။ တကယ်ဆို ကလေးတွေအနေနဲ့ သင်ယူမှုတစ်ခုခုကို ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးငယ်တွေကို သင်ကြားပေးနိုင်မယ့် ငွေကြေးနဲ့ တာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာ သင်ခန်းစား (၁၁)ခုကို ဖော်ပြပေး
သင့် ဆီးခုံမွှေးအကြောင်း သိထားသင့်သမျှ
သင့် ဆီးခုံမွှေးအကြောင်း သိထားသင့်သမျှ တစ်ခါတစ်လေမှာ သင် အရင်က လုံးဝ မစဉ်းစားမိတဲ့ သင့် ခန္ဓာကိုယ်က အစိတ်အပိုင်းတွေ အကြောင်း စဉ်းစားဖို့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ အခု သင့် ဆီးခုံမွှေးအကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ စပြီး ပြောပြပါမယ်။ ဒီ စိတ်ပျက်စရာ ဇာတ်လမ်းက အင်္ဂလန်၊ West
သင့်ရဲ့အားသာချက်တွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၄)ခု
သင့်ရဲ့အားသာချက်တွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၄)ခု သင့်ရဲ့အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို သင်သိပါသလား။ သင့်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတတ်ခြင်းရဲ့ အဓိကသော့ချက်က သင့်ရဲ့အားသာချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အလုပ်အကိုင်ကို မတွေ့ကြတဲ့အတွက် မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်နေကြရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မလုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်မနေပါနဲ့တော့။ သင့်ရဲ့အားသာချက်တွေကို အသုံးချပြီး ၀ါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ။